Fahasalamana, fiarovana ary tontolo iainana - SiChuan XiangYue Power Line Components Co., Ltd.
Ny fitondran-tena tompon'andraikitra sy ny fitomboana ara-toekarena maharitra dia ampahany amin'ny ADN hatramin'ny nahitana ny XY Tower.
Androany ny fampandrosoana maharitra sy ny toekarena dia ny lalàm-panorenanay izay ampahany lehibe amin'ny iraka sy serivisinay ary voalamina amin'ny alàlan'ny asa voarindra. Mino izahay fa ny mahay mandanjalanja mety dia tokony ho tratra eo amin'ny fampandrosoana ara-toekarena sy ny tanjona eo amin'ny tontolo iainana. Ny tanjona sy ny tanjona eo amin'ny tontolo iainana dia napetraka ho an'ireo orinasanay izay voamarina amin'ny alàlan'ny asa fitantanana sy fanaraha-maso tsy tapaka miaraka amin'ny fanaraha-maso tsy miankina anatiny sy fahatelo. XY Tower dia mino sy mampiroborobo fa ny mpiasanay rehetra dia tompon'andraikitra amin'ny fanarahana ny tanjona kendrena amin'ny tontolo iainana, ny tanjona ary ny fitakiana fitantanana. Izahay dia nanokana ny ho mpitarika amin'ny fitantanana HSE tompon'andraikitra amin'ny orinasan'ny namana.
XY Tower dia natokana ho an'ny hevitra fa ny lozam-pifamoivoizana rehetra dia azo sorohina ary manolo-tena amin'ny politika tsy misy loza izahay. Mba hahatratrarana an'io fanoloran-tena io sy hananana kolontsaina fanatsarana tsy tapaka ny adidintsika momba ny fahasalamana sy ny tontolo iainana dia izao manaraka izao no manaraka:
Mitazona ny tenantsika hahafantatra sy hanaraka ny lalàna sy ny lalàna ankehitriny sy ho avy.
Ampiharo fenitra sy fomba fanao henjana kokoa ao amin'ny orinasanay.
Ny fahasalaman'ny mpiasa no laharam-pahamehan'ny orinasa. XY Tower dia miantoka ny filaminana any amin'ny toeram-piasana ary ny mpiasa rehetra dia tsy maintsy ao amin'ny fitaovana Fiarovana amin'ny atrikasa, raha tokony hanaraka tsara ny kaody famokarana fiarovana kosa ny mpiasa.
Arovy ny Tontolo iainana amin'ny alàlan'ny fitazonana ireo fako avo lenta avo lenta amin'ny alàlan'ny hetsika isan-karazany, ary ahenao ny fanjifana ny enti-manana.
Fantaro hatrany ireo faritra mety ho fanatsarana ny rafitra fitantanana HSE ary apetraho ny fepetra ilaina hampiharana izany fanatsarana izany.